भिडियो – Page 510 – Etajakhabar
शाहरुख खानलाई भेट्न नपाउँदा तीन घण्टा रोईन् प्रेमगीतकी नायिका पूजा (भिडियो सहित)
नायिका पूजा शर्माले आफूले शाहरुख खानलाई भेट्न नपाउँदा तीन घण्टा रोएको बताएकी छिन् । शाहरुख खान आफूलाई अत्यन्तै मनपर्ने कलाकार भएको र उनी नेपाल आउँदा खानलाई भेट्न नपाउँदा आफू रोएको उनले बताएकी हुन् । उनले खानलाई एकपटक भेटेरै छाड्ने बताइन् । फर्सी नेटवर्कको अफगफमा कुराकानी गर्दै उनले शाहरुखका लागी ३ घण्टा मन्दिरमा गएर रोएको बताइन् । केही समय अगाडी शाहरुख नेपालको आएको बेला पूजाले चाहेर पनि भेट्न नप...
कण्डमको विज्ञापनमा डाइनोसर, अचम्म गर्छन् जापानीहरु (भिडियो सहित)
ताजा खबर :- जापानमा कण्डमको विज्ञापनमा डाइनोसरलाई देखाईएको एउटा विज्ञापन निकै चर्चित भएको छ । अनौठो सँस्कृति भएको जापानमा जापानी कण्डम मैन्युफैक्चरर, ओकामोटोले डाइनोसरको प्रयोग गरि विज्ञापन निर्माण गरेको हो । हजारौं बर्ष पहिले लोप भैसकेको यो विशाल जनावरलाई लिएर बनाईएको विज्ञापन कस्तो छ त ? हेर्नुहोस्, यो भिडियोः
प्रेमध्वजको‘ती आँखा’मा विकास र विनीता (भिडियो)
ताजा खबर काठमाण्डौं । ‘पर लैजाउ फूलहरु’ ‘घुम्तीमा नआउ है’ जस्ता हिट गीतहरुमा आफ्नो स्वर दिएका वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानले झण्डै एक दशकपछि आफ्नो स्वर रेकर्ड गराएका छन् । गायक प्रेमध्वजले जुगोल ढंगोलको संगीत तथा एरेञ्ज, डब्बु क्षेत्रीको शब्द रहेको ‘ती आँखामा’ बोलको गीतमा स्वर दिएका हुन् । प्रेमध्वजलाई केञ्जुमा सुब्बाले गायकीमा साथ दिएकी छिन् । मोहनराज आचार्यको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा मोडलद्वाय...
साहिलको ‘त्यो मन’मा सम्झना र केदारको प्रेम (भिडियो)
ताजा खबर काठमाण्डौं । पहिलो एल्बम ‘प्रियसी’पछि गायक साहिल खड्काले आफ्नो दोश्रो एल्बमको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘प्रियसी २’ एल्बममा समावेश हुने ‘त्यो मनमा’बोलको पप गीतको म्युजिक भिडियो उनले सार्वजनिक गरेका हुन् । संगीत सिर्जना समेत गर्दै आएका साहिलले यो गीतको शब्द र संगीत आफै गरेका हुन् । म्युजिक एरेन्ज संगीतकार टंक बुढाथोकीको हो । भिडियोको सम्पुर्ण छायांकन अष्ट्रेलियामा गरिएको छ । ‘यो गीत...
अन्तरवार्ता दिँदादिँदै कलाकार संजय गुप्ताले यसरी फकाए भिजेलाई…(हेर्नुस् रमाईंलो रंगखबर जम्काभेट)
ताजा खबर, काठमाण्डौं । आरजे र भिजेको छवि बनाएका संजय गुप्ता अब कलाकार बनेका छन् । उनले फिल्म ‘सफर’मा अभिनय गरेका छन् । यो फिल्म असोज २१ गतेबाट सार्वजनिक प्रर्दशनमा आउँदैछ । फिल्म रिलिजको पुर्वसन्ध्यामा अभिनेता गुप्तासँग रंगखबर च्यानलको जम्काभेट भएको छ । जम्काभेटका क्रममा उनले अभिनय गर्नु निकै नै गाह्रो कुरा रहेको बताए । अन्तरवार्ताकै क्रममा भिजेले ‘यो समयमा म एकदमै रिसाइसकेको छु र फकाउनुप¥यो भन...
हाँस्य कलाकार शिवहरी पौडेलले देशको अवस्थाका कारण सात पटक डिभी भरेको रहस्य खोले (भिडियो)
ताजा खबर, काठमाण्डौं । हाँस्य अभिनेता शिवहरी पौडेलले देशको अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रंगखबरसँगको जम्काभेटमा उनले देशलाई बनाउन छाडेर स्कुल बन्द गर्ने, आँगो लगाउनेसम्मको हर्कत गर्ने गरेकोमा मनमा चिसो पसेको बताए । उनले देशकै अवस्थादेखि विरक्तिएर ७–८ पटक अमेरिका जाने लक्ष्यका साथ डिभी परेको बताए । ‘तर, कहिल्यै परेन’, उनले भने । यतिवेला सफलतापुर्वक हलमा लागिरहेको फिल्म ‘६क्का पन्जा’मा उ...
शिल्पा पोखरेललाई छिट्टै आमा भन्ने चाहना छ: ऋषि लामिछाने, निर्देशक (किस्मत २) | भिडियो
ताजाखबर। अहिले चलचित्र बजारमा सर्वत्र चर्चा छ चलचित्र 'किस्मत २'को । निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको बैवाहिक प्रसंग अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । त्यसो त निर्माता ओझालाई आफ्नो चलचित्र चलाउन यस्तो हल्ला आँफैले चलाएको हल्ला पनि बजारमा छ । तर, चलचित्रका निर्देशक ऋषि लामिछानेले भने यो हल्ला चलचित्र चलाउन मात्र नभएको बताएका छन् । लामिछानेले 'हावा नचली पात हल्लिँदैन' भन्ने उखान भन्दै बिह...
सर्ट मुभी ‘प्ले गर्ल’ मा के भयो यस्तो ? (भिडियो सहित)
असोज ८ गते- निर्देशक शंकर अधिकारी घायलको अर्को सर्ट मुभी 'प्ले गर्ल' सार्वजनिक भएको छ । एनएचएस मिडियाको प्रस्तुतीमा युट्युबमार्फत् सार्वजनिक भएको मुभीमा समसामयिक बिषयलाई उतार्न खोजिएको छ । अधिकारी आफैंले यो मुभीको लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् । कस्तो छ त सर्ट मुभी 'प्ले गर्ल' ? हेर्नुहोस् भिडियोः
संसार देख्दैनन् तर बासुरीको धुनले आँशु झार्दिन्छन (भिडियो सहित)
ताजा खबर :-अर्जुन पौडेल जसले जन्मै देखि यो संसार देख्न सकेनन । सानै देखि बाध्य बाधनमा चासो राख्ने अर्जुनले बच्चै देखि मादल बजाउने, भैलो मा बासुरी बजाउने गरेको देख्दा पनि साथि भाइ , स्कुलको गुरु , आफ्नो बाबा लगाएतले यसै छेत्रमा लाग्न हौसला दिएकै कारणले २०६० साल देखि नियमित बासुरी बजाउन थालेको बताउछन। करिब १० वर्षा अर्थात् २०७० साल सम्म दोहोरि छेत्रमा बासुरी बजाएको र पछि अर्थात् २०७० साल पछि पुजा आ...
प्रत्येक बसको ८ सिट टिकट बेच्दैनन् व्यवसायी, के भन्छन् अनुगमनकर्ता ?
काठमाडौं, ८ असोज सरकारले दसैंलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा व्यवस्था गरेको छ । टिकट खुले लगत्तै टिकट लिने यात्रुको चाप उस्तै छ । तर काठमाडौंका यातायात व्यवसायीले पनि आफ्ना बसमा ८ वटा सिटको टिकट आफैंसँग राखेर मात्रै अरु बिक्री गर्ने गरेका छन् । हेर्नुहोस् यो भिडियो:
Previous 1 … 509 510 511 … 527 Next